हकप्रद शेयर निष्कासनको तयारीमा रहेको प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सको शेयर किन्दै हुनुहुन्छ ? | गृहपृष्ठ
Home लगानी हकप्रद शेयर निष्कासनको तयारीमा रहेको प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सको शेयर किन्दै हुनुहुन्छ ?
हकप्रद शेयर निष्कासनको तयारीमा रहेको प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सको शेयर किन्दै हुनुहुन्छ ?
हेर्नुहोस् कम्पनी विश्लेषण
कम्पनी ऐन २०६३ बमोजिम कम्पनी रजिष्टार्डको कार्यालयमा दर्ता भई सन् २००० नोभेम्बर ३० बाट व्यवसाय शुरू गरेको प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सले चालू आव २०७४/७५ को प्रथम त्रैमासमा रू. २ करोड ५२ लाख नाफा कमाएको छ । यो अघिल्लो आवको सोही अवधिमा भन्दा ३९ प्रतिशत बढी हो । कम्पनीको आम्दानी ३९ प्रतिशतले बढेकाले नाफा बढेको हो । सोही अवधिमा कम्पनीको चुक्तापूँजी २० प्रतिशतले बढेर रू. ४२ करोड ७६ लाख पुगेको छ भने जगेडा कोषमा रू. १४ करोड ९६ लाख छुट्याएको छ । बीमा कोषको रकम ५० प्रतिशतले बढेर रू. ३६ करोड ५० लाख पुगेको छ । कम्पनीको मङ्सिर १ गते सम्पन्न वार्षिक साधारणसभाले २० प्रतिशत बोनस शेयर र रू. ४५ लाख १ हजार ८ सय ९५ नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारीत गरेको छ । साथै बीमा समितिले निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई चुक्तापूँजी रू. १ अर्ब पुर्याउन निर्देशन दिएको छ । सोही अनुसार यस कम्पनीले १ बराबर शून्य दशमलव ३०(१ः०.३०) अनुपातमा हकप्रद शेयर निष्कासन गर्नको लागि नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट कात्तिक २३ गते अनुमति पाएको छ । कम्पनीले रू. एक सय अङ्कित दरको १२ लाख ८३ हजार ४० कित्ता हकप्रद शेयर निष्कासन गर्नेछ । सो हकप्रद शेयर निष्कासनको लागि कम्पनीको बुक क्लोज मङ्सिर १५ गते रहेको छ भने विक्री प्रबन्धक एनआईसी एशिया क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ ।
पछिल्लो व्यापार मूल्यः रू. ११६०
५२ हप्ताको उच्च व्यापार मूल्यः रू. १७५०
५२ हप्ताको न्यून व्यापार मूल्यः रू. ३४६
१८० दिनको भारित औसत मूल्यः रू. १४८८.७१
अध्यक्ष : अशोक कुमार अग्रवाल
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत : बि.के. महर्जन
प्रधान कार्यालय : कमलादी कम्पलेक्स, काठमाडौं
शाखा : ३६
वेबसाइट : www.prudential.com.np
स्टक टिकर : पिआईसिएल
कम्पनीले सार्वजनिक गरेको पहिलो त्रैमासिक वित्तीय विवरण अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ र २०७३/७४ बीच तुलना गर्दा :
चुक्तापूँजीको तुलनामा खुद नाफा ५ दशमलव शून्य ८ प्रतिशतबाट बढेर ५ दशमलव ९० प्रतिशत पुगेको छ ।
रू. ३६ करोड ६९ लाख बीमा शूल्क वापत आर्जन गरेको छ भने विभिन्न शीर्षकमा रू. ४ करोड ३८ लाख आम्दानी गरेको छ । कम्पनीले खर्च भने विभिन्न शीर्षकमा गरि रू. १ करोड ८५ लाख गरेको छ ।
चालू सम्पत्ति १९ प्रतिशतले बढेर रू. १ अर्ब ६२ करोड ४३ लाख रहेको छ भने चालु दायित्व २० प्रतिशतले बढेर रू. १ अर्ब २ करोड ३५ लाख पुगेको छ ।
कुल दाबी भुक्तानी रकम रू. १७ करोड २२ लाख रहेको छ भने उक्त रकम १ हजार ४ सय ६७ जनामा भुक्तानी गरेको छ । कम्पनीले भुक्तानी दिन बाँकी दाबी रकम रू. ८० करोड ४५ लाख रहेको छ ।
कम्पनीले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरण अनुसार प्रतिशेयर आम्दानी रू. २३ दशमलव ६०, मूल्य आम्दानी अनुपात ६१ दशमलव ४३, प्रति शेयर कूल सम्पत्तिको मूल्य रू. ४ सय ५९ दशमलव ६७ र प्रति शेयर नेटवर्थ रू. २ सय २० दशमलव ३६ रहेको छ । मङ्गलवारको मूल्य नेटवर्थको ५ गुणा छ ।
विक्री चाप : कम्पनीको मङ्गलवार भएको शेयर कारोबारको अन्तिम समयसम्ममा खरीद चापको तुलनामा विक्री चाप साढे ५ गुणा बढी भएको छ । सो अवधिसम्म २ हजार ९ सय ११ कित्ता शेयर विक्री र ५ सय २६ कित्ता शेयर खरीद गर्ने माग रहेको थियो ।
३० अगष्ट २०१७ २ नोभेम्बर२०१७
मैनबत्ती विश्लेषण : कम्पनीको ५४ दिन भएको कारोबारमा अन्तिम दिन इन्भर्टेड ह्याम्मर आकृती बनेको छ । यस्तो आकृतीले कम्पनीको शेयर मूल्य आगामी दिनमा बढ्ने सङ्केत गर्दछ ।
आरएसआई : कम्पनीको ५४ दिनको कारोबारमा आरएसआई ओभरवेट जोन (३८ दशमलव ८३ स्केल) मा छ । यसले शेयर खरीद विक्री चाप सन्तुलनमा रहेको देखाउँछ ।
स्ट्याण्डर्ड डेभिएसन : कम्पनीको ५४ दिनको कारोबारमा स्ट्याण्डर्ड डेभिएसन ९ दशमलव ९७ विन्दुमा छ । उतारचढाव सामान्य रहेको छ ।
मुभिङ एभरेज : कम्पनीको ५४ दिनको कारोबारमा २६ दिने औसत मूल्यरेखा र १४ दिने औसत मूल्यरेखा एकअर्कासँग टाढिएका छन् । हालको मूल्य र १४ दिने औसत मूल्यरेखा भन्दा २६ दिने मूल्य रेखा माथि छ । यदि हालको मूल्य रू. १ हजार १ सय ६० देखि बजारको अवस्था परिवर्तन भई मूल्य सस्तिएमा रू. १ हजार ७४ मा टेवा पाउन सक्छ भने मँहगिएमा रू. १ हजार १ सय ९० मा प्रतिरोध पाउन सक्छ ।